Lahatsoratra nataon'i Madhavi Vaidya ao amin'ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Madhavi Vaidya
Madhavi dia mpanoratra an-tsoratra Creative Creative izay manana traikefa 8+ taona amin'ny indostrian'ny B2B. Amin'ny maha mpanoratra atiny za-draharaha azy, ny tanjony dia ny hampisy lanjany ny orinasa amin'ny alàlan'ny fahaizany manoratra atiny tokana. Izy dia mikendry ny hametraka tetezana fiteny eo anelanelan'ny haitao sy ny tontolon'ny fandraharahana amin'ny fitiavany ny teny voasoratra. Ankoatra ny fanoratana atiny dia tiany ny mandoko sy mahandro!
Votoatin'ny vavahady: ny vavahady fidirana amin'ny B2B tsara!
Sabotsy, Desambra 19, 2020 Sabotsy, Desambra 19, 2020 Madhavi Vaidya
Ny atiny misy vavahady dia paikady ampiasain'ny orinasa B2B maro hanomezana atiny tsara sy misy dikany hahazoana fitarihana tsara ho takalon'ny fifanakalozana. Tsy azo idirana mivantana ny atin'ny vavahady ary afaka mahazo izany ny olona aorian'ny fifanakalozana fampahalalana lehibe sasany. 80% n'ny fananana varotra B2B no miorina amin'ny vavahady; satria ny atiny mifatotra dia stratejika ho an'ireo orinasa mpiorina B2B. Hubspot Zava-dehibe ny fahalalana ny maha-zava-dehibe ny atin'ny vavahady raha toa ka orinasa B2B ianao
Ireo fitaovana roa mahomby indrindra amin'ny fahombiazan'ny fitarika B2B
Alatsinainy, 15 Jona, 2020 Alatsinainy, 15 Jona, 2020 Madhavi Vaidya
Safidio ny fiaraha-miory amin'ny mpanjifa sy ny traikefan'ny mpanjifa ho toy ny singa manan-danja amin'ny paikadinao ary mety ho efa hitanao ihany koa ilay sombin-javatra tsy hita izay afaka mameno ilay piozila mitarika ankehitriny!